Afhayenka Middowga Musharaxinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay arrimo la xariira bannan-baxa ay ku dhawaaqeen inuu ka dhacayo magaalada Muqdisho birri oo ku began maalinta jimcaha ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta kula hadlay Hotel Jaziira ayaa sheegay in in mudaharaadka Jimacaha dhacaya uu ka dhashay hab-dhaqanka liita ee uu caadeystay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta DFS Geelle wuxuu Farmaajo ku eedeeyay inuu meesha ka saaray wixii Soomaalidu ku heshiisay ee sharci iyo dastuur ahaa, is doorasho iyo dimuquraadiyadna ahaa.
Wuxuu sheegay in Afartii sano ee la soo dhaafay ee Farmaajo wadanka Madaxweynaha ka ahaa aysan dalka ka dhicin hal doorasho oo xalaal ah, wuxuuna xusay doorashooyinkii boobka ahaa ee Dhuusamareeb, Jowhar iyo Baydhabo lagu qabtay.
“Farmaajo wuxuu aaminsan yahay in wadanka laga daayo xukunka wareegaya iyo dimuqraadiyadda si uu isagu u sii jooggo, waxaa ka hoos baxsan in dalka dimuqraadiyadu aysan dumin ee kali-talisnimadu burburisay”. Ayuu yiri Geelle.
Afhayenka Middowga Musharaxinta wuxuu xusay in Kooxda Farmaajo mudaharaadkan kuwii ka horreeyay ay isla gobtaas ku qabteen, isagoo jira cudurka COVID-19, isla-markaana ay dad waayeel ah oo u badan haween dan yar ah ay isku soo bixin jireen,
Wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ka war qabaan qatarta COVID-19-ka, ayna diyaariyeen agabka looga hor tago oo ay ka mid yihiin, Af-xirka, faraxalka, gacmo gashiga iyo wixii la mid ah.
Taliyayaasha ciidamada ayuu ugu baaqay in ay amniga bannaan-baxa sugaan, kana fogaadaan ku milanka siyaasadda oo aan shaqadoooda ahayn.
Rajiimka Farmaajo ayaa sheegay in la mamnuucay isku imaadka dad weynaha taas oo ay uga golleeyihiin baajinta bannaan-baxa birri.